Deetaa xinnaateen maxxansuu
Deetaa galmeeke maxxansuuf si gargaaru hir'isuuf murteessuu ni dandeessa. Qindaa'inootni gara maxxansaatti takkaan maxxansuuf ykn gara faayiliitti maxxansuuf addaa addaan qindeessuu ni dandeessa.
Dirqaleewwan Qindaa'inoota kanaa gad jiran keessaa tokko cuqaasi:
Takkaan gara maxxansaatti maxxansaa utuu jirtuu, dirqaleewwan deetaa hir'isan qindeessuuf Maxxansaa- fayyadami
Gara faayiliitti maxxansaa utuu jirtuu, dirqaleewwan deetaa hir'isan qindeessuuf Faayiliitti maxxansi- fayyadami
Makaa dirqaleewwan arfan kamuu filadhu, sanaa booda Tole cuqaasi.
Galmeewwan hundi ati ammaa booda maxxansitu dirqaleewwan jijjiiraman fayyadamu.
Deetaa iftoomaaf, gargartootaaf, ykn suurxiqqootaaf hir'isuu ni dandeessa. Deetaa yoo hir'istu, maxxansaalee hedduu irratti hir'ina qulqullina maxxansaa hin argitu. Garuu yeeroon maxxansaa gara malee ni gabaabata, akkasumas yoo faayiliitti maxxansitu, hammamtni faayilii gara malee xinnaata.
Title is: Deetaa xinnaateen maxxansuu